Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Haddii aad leedahay qoys / Dib u mideynta qoyska
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 19 8 2019
Halkan waxaad ka akhrin kartaa wixi ku saabsan sida qoyskaagu u codsan karo inay adiga dib kuugula midoobaan gudaha Iswiidhan.
Dib u mideynta qoyska micnaheedu waa in qoys kala qaybsanaa ay codsan karaan inay ku wada noolaadaan Iswiidhan una yimaadaan qofkii helay sharciga deganaansho ee joogtada ah ama sharci deganaansho oo saddex sano ah lehna heerka qaxoontinimo.
Qoyska kuugu dhow ayaa xaq u leh inay kuu soo guuraan (xaaska, ninka, lamaanaha la wada noolaa, lamaanaha iyo caruurta ka yar 18 sano). Waa khasab in qofku ka weynyahay 21 sano oo waa khasab in la is guursaday ama la wada noolaa ka hor intaan la soo qixin.
haysta sharci deganaansho oo joogto ah,
helay ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka oo qoxooti ahan ama baahi difaac u qabtid iyo loo qiimeeyay inuu haysto fursad wanaagsan uu ku helikaro ruqsadda degnaanshada oo joogtada.
Sidee ayaan samaynayaa si aan u codsado dib u mideynta qoyska?
Qoyskaagu waxay codsigan ka dhiiban karaan dalka ay deganyihiin. Waxay iyagu ka codsan karaan safaarad Iswiidhan ah ama bogga intarnatka ee Hey'ada Socdaalka.
Marka qoyskaagu codsado dib u mideynta qoyska waa khasab inay muujiyaan cida ay yihiin. Waxay u baahanyihiin inay tusaan baasaboor ansax ah ama dukumenti aqoonsi oo u dhigma.
Akhri dheeraad ku saabsan sharciga deganaansho si loogu soo guuro nin, xaas, lamaane la wada noolaa oo diiwaan gashan ama qof la wada noolaa.
Akhri dheeraad ku saabsan in la codsado sharciga deganaansho ee dhanka dib u mideynta qoyska.